トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ngebuhle nebubi kuhloswe imodeli umcimbi wamakhaza pachinko
Ethebuleni umcimbi, kuyiqiniso ukuthi ngisho pachinko eshintsha kucatshangwa Cishe ukunikela ngo kunokujwayelekile. Nokho, kusho ukuthi yonke yesikhulumi ukulungiswa okunjalo akukhona Yebo. Ngo, ngesikhathi somcimbi, sizobheka emihle nemibi hit imodeli mcimbi. Ekhuluma nemibi
imodeli umcimbi, imodeli umcimbi uma umcimbi endabeni umshini yokutakula.
it is, ngaphansi kwezimo ezivamile, is belibonakala uma une imodeli ukuthi ayinayo egijima ngempela kwenzeka imodeli. Ukuze imodeli akukho msebenzi ngesikhathi evamile, siba uma umshini zokuthola piggyback ku ukugijima-up umcimbi. Ngaphezu kwalokho, kuleli cala ukuthi kuyinto wave ezimbi ngoba akuyona emhlabeni isikhathi evamile, kukhona kungenzeka ukuthi utshalomali luyanda. Kubuka
isibonelo nail ukulungiswa, kungase kungabi lula ukuqonda okungcono.
welula imodeli kakhulu futhi tepid umcimbi, nail ukulungiswa ngesikhathi amamodeli umcimbi ezibhekwa umshini ukululama ephelele, noma nje ukuhlabelela kanye izenzakalo esimweni esejwayelekile ngaphandle zingaphazamisi lutho, cishe ami enamathiselwe lokuqala kuphela, futhi noma nje ukuvula kancane, nail ishintshile kuyoba mayelana elilodwa noma amabili.
ngesikhathi sesehlakalo, ngoba lo mqondo fixed ukuthi kwakungeke welula kukhona ngokuphelele, ngeke bavame ukutshala nokujaha ngaphezulu kokujwayelekile. In the side pachinko emakhazeni, kodwa inhloso.
uma izinzipho kuqinile, imodeli mcimbi kugwenywe, kutuswa ukuba ushaye imodeli ngokuqiniseka, ezifana ezikhangiso onobuhle. Ngakho ukuthi kungahlali ibe demerit umcimbi onobuhle yalokho, sicela ukubona ukuhlola kahle evamile nail ukulungiswa.
Ngakho, ukukhuluma sokunconywa esilandelayo, kunjalo mode usuvulekile imodeli umcimbi ngesikhathi umcimbi welula ngobuqotho. Njengoba izenzakalo, Ngizofika zama Khonza pachinko eshintsha. Ikakhulukazi, noma ube imishini emisha uma kwenzeka imodeli, uma une athi Xintai amamodeli izimpawu imodeli imifanekiso umcimbi, kungashiwo ukuthi sikwenze imodeli kuqala.
_x00 It 0D_ uthi kungani onobuhle ezifana Kuthiwani uma inhloso imodeli umcimbi wokuqala, uzobe egijima ngesikhathi evamile kakhulu abathintekayo.
Ngesikhathi somcimbi, yilokhu operation evamile kimi futhi ngakho ngakho egijima Isnt model. Uthini, Xintai futhi athi Xintai, futhi onobuhle ezithandwayo ezifana imodeli billboard, wathi ukusebenzisa yize ukuze ushiye asidlulisela ngaphezulu kokujwayelekile. Iqiniso lokuthi ezinjalo ukuza alinge izenzakalo kukhombisa imodeli Kuyaphawuleka ukuthi umcimbi ofuna ukwenza wenkokhelo isikhalazo kakhulu.
futhi ukuhlola imodi ezibucayi lonke pachinko emakhazeni lomcimbi, kuba umbono wokuthi ukusebenzisa kahle. Ngesikhathi izenzakalo ezibalulekile ezinjengalezi, maningi amathuba okuthi eze ukuvula wonke futhi nail ukulungiswa. Ukuphikisana kusimo imodeli umcimbi, ngamayunithi ezimbalwa kuphela evamile nail ukulungiswa, abanye thina ngokuvamile usuvulekile.
ithebula ukukhetha okungukuthi, ukubheka idatha kunokuba ebuka izinzipho, lithi umuntu ukuhlola wave yesikhulumi kungenzeka kuqala. Ngale ndlela, i-futhi okufanayo kwenzeka imodeli, ungase ukhethe kusimo omunye imishini eminingi yokutakula noma ezuzisa kakhulu ukukhululwa umshini ukukhomba kahle ngokuwina iphesenti siyahluka kakhulu. D_ ithebula olukhethayo, ukubheka idatha kunokuba ebuka izinzipho, lithi umuntu ukuhlola wave yesikhulumi kungenzeka kuqala. Ngale ndlela, i-futhi okufanayo kwenzeka imodeli, ungase ukhethe kusimo omunye imishini eminingi yokutakula noma ezuzisa kakhulu ukukhululwa umshini ukukhomba kahle ngokuwina iphesenti siyahluka kakhulu. D_ ithebula olukhethayo, ukubheka idatha kunokuba ebuka izinzipho, lithi umuntu ukuhlola wave yesikhulumi kungenzeka kuqala. Ngale ndlela, i-futhi okufanayo kwenzeka imodeli, ungase ukhethe kusimo omunye imishini eminingi yokutakula noma ezuzisa kakhulu ukukhululwa umshini ukukhomba kahle ngokuwina iphesenti siyahluka kakhulu.